Semalt: Ahoana ny fomba hanamboarana tranokala mahomby?
Professional web scrapers noho ny fanangonana ny angon-drakitra rehetra avy hatrany. Ny fetcher HTTP dia ahafahanao manadio pejy ao amin'ny tranonkalan'ny vohikalam-baiko. Ny tranonkala dia feno feno fampahalalana sarobidy izay azo ampiasaina amin'ny sehatry ny varotra sy ny tsiambaratelo fifaninanana.
Raha toa ianao ka miasa amin'ny fanangonam-baovao amin'ny fanadihadiana ataon'ny mpanjifa sy ny tsiambaratelo ara-barotra, ny fanasitranana tranonkala no vahaolana farany. Ho an'ny mpandrindra fanangonam-pejy ny tranonkala, ny fanalana ny tranonkala dia fomba iray ahazoana fahazoana sy fisintonana ireo angona avy amin'ny tranonkala amin'ny endriny efa voafaritra izay mora dinihina.
Nahoana no manala ny tranonkala?
Eto amin'ity torolalana feno fanarabiana ity dia hianatra ny fomba hanamboarana tranonkala iray ianao. Mariho fa ny "scratch" dia tenim-pampandrosoana azo itokisana sy ny fiaraha-miombon'antoka izay ahafahanao mamorona fitaovana maoderina ho an'ny tranonkala . Ny fanasitranana tranokala dia fahafahana hampivelatra ny raharaham-barotra ataonareo ary hanolotra tombontsoa sarobidy momba ny vokatrao amin'ny mpanjifa mety.
Hita taratra amin'ny firongatry ny fironana sy ny olana eo amin'ny sehatry ny teknolojia. Amin'izao fotoana izao, afaka maka maimaim-poana sy manangona votoaty avy amin'ny tranonkala mampiasa smartphone ianao. Ohatra, Instapaper dia sari-tanan'ny serivisy azo itokisana izay ahafahanao mitahiry dika mitovy amin'ny tanjonao eo amin'ny fitaovana findainao.
Ho an'ny mpivarotra ara-bola, Mint. com dia fitaovana fandinganana tranonkala hijerena. Ity fitaovana ity dia manomana sy manatanteraka ny antsipirian'ny tsenan'ny raharaham-barotra ary mampiseho ny angon-drakitra miaraka amin'ny famintinana sy tabilao mahafinaritra. mint. com dia manampy ny mpividy mba hanaraka ny fividianana vokatra sy ny fampiasam-bola.
Ny fijerena ny fitsipi-pitondrantena ao amin'ny tranokala
Ny tranonkalan'ny fako matetika dia mahatonga ny tompon'ilay tranonkala hanakana ny adiresy IP anao. Misy tranonkala sasantsasany ahitana ireo torolàlana "Complete Disallow". Ireo torolàlana ireo dia tsy mamela scrabble tranokala hanala ny karazana tranonkala.
Ny fanasitranana ny tranonkala dia dingana amin'ny fahazoana angona avy amin'ny tranonkala hafa. Na dia izany aza, ny fandefasana fampahalalana avy amin'ny tranonkala sy ny famoahana ny votoaty ao amin'ny tranonkalanao dia heverina ho toy ny fandikana ny teny sy ny "Stealing. "
Manamboatra sampana mahomby - Ny mpitroka dia hamela anao haka URL avy amin'ny rohy ivelany
Dedup - Dedup dia hanampy
Manangana Fetcher HTTP - Ny Fetcher dia miasa mba handrafetana ny tranonkala amin'ny tranonkalan'ny tranonkala
Mandamina ny URL Queue Manager - Ny mpitantana dia miorina eo amin'ny
Ny tanjona voalohan'ny fanorenana
Ny antontan-kevitra - Ity no toerana ahafahana manangona vaovao halefa ho an'ny fanadihadiana sy fitantanana Ny fanivanana tranonkala dia manaisotra ireo angon-drakitra avy amin'ny tranonkala raha mahita ny vokatra sy ny fahombiazany. Raha miasa amin'ny fako lehibe ianao dia jereo ny antony hafa toy ny serasera, ny duplication ary ny famahana ny DNS. Ny safidinao amin'ny fiteninao amin'ny programa dia mitaky be ihany koa. Maro amin'ireo tranokala no manatsara ny tranokala amin'ny Python.
Ny fanorenana tranokala iray dia mora. Na izany aza, mila miasa amin'ny habetsahan'ny fitaovana enti-tranonkalanao ianao mba hisorohana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona sy ny tranonkala manelingelina noho ny fanakanana ny tambajotra. Mitantana sy miasa ho an'ny tranokala maivana amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny fatiantoka maromaro sy ny fananana ara-tsaina. Ampiasao ny teboka voalaza etsy ambony mba hanaovana tapa-tranonkala iray izay mifanaraka amin'ny filànao amin'ny tranonkalanao Source .